Jurgen Klopp ayaa difaacay Sadio Mane kaddib eedeymaha kaga yimid Pep Guardiola – Gool FM
(Liverpool) 04 Nof 2019. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka habeen dambe ay naadiga Genk ku wada ciyaari doonaan tartanka Champions League, wuuu kaga hadlay dhowr arrimood ee quseeya Reds.
Jurgen Klopp ayaa inta uu ku gudi jiray shirka jaraa’id wuxuu ka jawaab celiyay eedeeynta uu Pep Guardiola u soo jeediyay Sadio Mané, kaddib kulankooda ugu dambeeyay ee Southampton.
Pep Guardiola ayaa timaamay in Sadio Mané inuu si ula kac ah isku tuuray si uu jiliin ugu hor sameeyo garsoorka isla markaana uu u helo rigoore inta lagu gudi jiray ciyaartii la soo dhaafay ay kula ciyaareen Aston Villa ee horyaalka Premier League.
Haddaba Jurgen Klopp oo ka jawaab celinayay hadalkii Pep Guardiola ayaa wuxuu yiri:
“Mané ma ahan nin istuur tuura, waxaan 100% hubaa inuusan sameynin jiliin si uu u helo rigoore, sida uu tilmaamay macalinka Manchester City”.
“Ma aqaano inuu jiray waqti si uu Pep Guardiola kaga hadlo rigooradii Sadio Mané ee aan loo xisaabinin kulankii Aston Villa”.
“Mané wuxuu u qalmay in loo xisaabiyo rigoore kulankii Liverpool, waxaa jiray isku dhac yar ee u dhaxeeyay Sadio iyo daafaca kooxda Aston Villa, marna ma uusan sameynin jiliin”.
Yeelkeed, waxaa xusid mudan in Liverpool ay Sabtida ku soo dhaweyn doonto garoonka Anfield kooxda ay xilfaltamaan ee Manchester City, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 12-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.